Induction Adkeynta Nidaamka Dusha Sare Codsiyada-HLQ kululeeyaha kululaynta
Induction Adkeynta Qalitaanka Adkeynta Codsiyada
Waa maxay qallajinta induction?
Adkeynta adkaynta waa nooc ka mid ah daaweynta kuleylka taas oo qayb bir ah oo leh kaarboon ku filan lagu kululeeyo berrinka soo-gelinta ka dibna si dhakhso leh loo qaboojiyo. Tani waxay kordhisaa adkaanta iyo jajabka qaybta. Kuleylka kuleylintu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad haysato kuleyl kuleyl ah heerkul horay loo go'aamiyay waxayna kuu sahleysaa inaad si sax ah u xakameyso nidaamka qallafsanaanta. Ku celcelinta geedi socodka sidaas ayaa la damaanad qaaday. Badanaa, adkaanshaha indha-indheynta waxaa lagu dabaqaa qaybaha birta ah ee u baahan inay yeeshaan iska caabin dusha sare leh, isla mar ahaantaasna ilaashadaan agabkooda farsamo. Kadib geedi socodka qallajinta indha-indheynta kadib, qalabka birta ah wuxuu ubaahan yahay in lagu demiyo biyaha, saliida ama hawada si loo helo waxyaabo gaar ah oo lakabka dusha sare ah.
Adkeynta adkaynta waa hab si dhakhso ah iyo xulasho ahaan loo adkeeyo dusha sare ee qayb bir ah. Xadhig naxaas ah oo xambaarsan heer aad u sarreeya oo isweydaarsiga ayaa la dhigayaa meel u dhow (ma taabanayo) qaybta. Kuleylka waxaa laga soo saaraa, iyo meel u dhow dusha sare ee qasaaro habeysan iyo luminta dhuunta. Quench, badanaa biyaha ku saleysan oo lagu daro waxyaabo sida polymer, ayaa lagu jiheeyaa qeybta ama waa la quusayaa. Tani waxay u beddeleysaa qaab-dhismeedka martensite, taas oo aad uga adag qaab-dhismeedkii hore.
Nooc caan ah, oo casri ah qalabka qallajinta qallajinta waxaa loo yaqaan 'scanner'. Qaybta waxaa lagu qabtaa inta udhaxeysa xarumaha, waa lawareegayaa, waxaana la mariyaa xarig horusocod ah oo bixiya kuleylka iyo daminta labadaba. Deminta waxaa lagu hagaajiyaa birta, sidaas darteed meel kasta oo ka mid ah qaybta si dhakhso leh ayaa loo qaboojiyaa isla marka la kulmo kuleylka. Heerka awoodda, waqtiga joogitaanka, skaanka (quudinta) sicirka iyo waxyaabaha kale ee isbeddela ee nidaamka waxaa si sax ah u kontaroola kombiyuutar.
Nidaamka qallafsanaanta kiiska ayaa loo isticmaalay in lagu kordhiyo caabbinta xirashada, adkaanta dusha iyo nolosha daalka iyada oo loo marayo abuurista lakab dusha sare oo adkaaday iyada oo la ilaalinayo microstructure asaasi ah oo aan la taaban.
Adkeynta adkaynta waxaa loo isticmaalaa in lagu kordhiyo aaladaha farsamada ee ka kooban qaybaha birta ah aag gaar ah. Codsiyada caadiga ah waa awood-kororsi, ganaax, qaybaha mashiinka iyo shaambadaha. Adkaynta indha-indheynta ayaa ku fiican hagaajinta sheegashada dammaanadaha / cilladaha goobta. Faa'iidooyinka aasaasiga ahi waa hagaajinta xoogga, daalka iyo xirashada caabbinta aagagga ku habboon iyada oo aan dib loo qaabeyn qaybta.
Nidaamyada iyo Warshadaha ka faa'iideysan kara adkaanta indha-indheynta:
Adkaanshaha tubada & tuuboyinka
Faa'iidooyinka adkaynta Induction:
Loogu xagliyay qaybo ka mid ah culeyska culus. Induction waxay keentaa adkeyn dusha sare leh kiis qoto dheer oo awood u leh inuu wax ka qabto culeysyada aadka u sarreeya. Awoodda daalka waxaa lagu kordhiyaa soosaarka jilicsanaanta jilicsan ee ku hareeraysan lakabka sare ee aadka u adag. Guryahaani waa kuwo loo jecel yahay qaybaha la kulma rarka torsional iyo dusha sare ee la kulma xoogagga saameynta. Soo-saarista soo-saarista ayaa lagu sameeyaa hal qayb markiiba taas oo u oggolaanaysa dhaqdhaqaaq cabbir aad u saadaalin kara qayb ilaa qayb.
Xakamaynta saxda ah ee heerkulka iyo adkaanta qallafsanaanta
Kulaylinta la kontoroolo iyo deegaanka
Si fudud loogu daray khadadka wax soo saarka
Nidaam dhakhso leh oo lagu celin karo
Shaqo kasta waxaa lagu adkeyn karaa astaamaha saxda ah ee saxda ah
Habka tamarta ku shaqeeya
Qalabka birta iyo birta-birta ah ee lagu adkeyn karo soo-dhaweynta:
Dhejiyeyaasha, flanges, gears, saa'idka, tuubada, jinsiyadaha gudaha iyo dibadda, crankshafts, camshaft, harqood, fallaadhihii drive, fallaadhihii wax soo saarka, dunmiiqa, baararka torsion, siddooyinkiisa jeexjeexa, silig, filtarka, layli dhagax, iwm
Kordhinta Xirashada Dharka
Waxaa jira xiriir toos ah oo udhaxeeya adkaanta iyo adkeysiga xirashada. Caabbinta xirashada qayb waxay si aad ah ugu sii kordheysaa adkaanshaha indha-indheynta, iyadoo loo maleynayo in bilowgii hore ee maaddada ay ahayd mid la daboolay, ama lagu daaweeyay xaalad jilicsan.
Kordhinta Awoodda & Daalka Nolosha sababtoo ah Soft Core & Haraaga Cadaadiska Cadaadiska ee Dusha sare
Cadaadiska cadaadiska (badanaa loo tixgeliyo sifo wanaagsan) waa natiijo ka timid qaab dhismeedka qallafsan ee u dhow dusha sare ee wax yar ka badan mugga iyo qaabdhismeedka hore.
Qaybaha waxaa laga yaabaa in la dejiyo ka dib Dhibaatada Induction si aad ula qabsato Heerka Adag, sidaad rabto
Sida geeddi-socod kasta oo soo saaraya qaab-dhismeedka martensitic, dabeecad-xumadu waxay hoos u dhigi doontaa adkaanta iyadoo hoos loo dhigayo jilicsanaanta.
Kiis qoto dheer oo leh adag adag
Qoto dheer kiisku waa .030 ”- .120” taas oo ka qoto dheer celcelis ahaan marka loo eego geedi socodka sida carburizing, carbonitriding, iyo noocyada kala duwan ee nitriding ee lagu sameeyo heerkulka hoose ee muhiimka ah. Mashruucyada qaarkood sida faashashka, ama qaybo wali waxtar leh xitaa markay waxyaabo badani duugoobaan, qoto dheer kiisku wuxuu noqon karaa ilaa ½ inji ama ka weyn.
Nidaamka Adkaynta ee Xulista leh Looma Baahan Yahay Masjirin
Meelaha leh alxanka ka dib ama ka-dib-u-shaqeyntu waxay ahaadaan kuwo jilicsan - hababka kale ee daaweynta kuleylka ayaa aad u yar oo awood u leh inay tan gaaraan.
Xadgudubka Ugu Yar
Tusaale: wiish 1 "Ø x 40" oo dherer ah, oo leh laba joornaal oo siman, midkiiba 2 "dheer oo u baahan taageero culeys iyo xirasho iska caabin ah. Adkaynta ku-shubista waxaa lagu sameeyaa oo keliya dusha sare, wadar ahaan 4 "dherer. Iyadoo la adeegsanayo qaab caadi ah (ama haddii aan ku adkaynno dhererka oo dhan arrintaa), waxaa jiri doona si aad u ballaaran oo bog ah.
Kuu ogolaanayaa isticmaalka Kharashaadka Qiimaha Jaban sida 1045
Birta ugu caansan ee loo isticmaalay qaybaha in induction adkaanta ay adkaato waa 1045. Waa mid si fudud loo farsameyn karo, qiimo jaban, iyo maadada kaarboonka oo ah 0.45% magac ahaan, waxaa suuragal ah in induction uu adkaado ilaa 58 HRC +. Waxay sidoo kale leedahay khatar yar oo ah dillaac inta lagu jiro daweynta. Qalabka kale ee caanka ah ee hawshani waa 1141/1144, 4140, 4340, ETD150, iyo bir bir ah oo kala duwan.
Xaddidnaanta Adkaynta Induction
Waxay ubaahantahay Soo-saaris Induction iyo Qalabka oo la xiriira joomatari Qaybta
Maaddaama masaafada isku-xidhka qayb-ilaa-gariiradda ay muhiim u tahay kuleylka wax ku oolka ah, cabirka gariiradda iyo dusha sare waa in si taxaddar leh loo xusho. In kasta oo daaweeyayaasha badankood leeyihiin arsenal of gariiradda aasaasiga ah si ay u kululeeyaan qaababka wareegsan sida fallaadha, biinanka, rollers iwm, mashaariicda qaarkood waxay u baahan karaan xirmo caado ah, mararka qaarkoodna ku kaca kumanaan doolar. Mashaariic dhexdhexaad ah ama heer sare ah, faa iidada kharashka daaweynta ee dhimay qayb kasta waxay si fudud u dheellitiri kartaa kharashka gariiradda. Xaaladaha kale, faa'iidooyinka injineernimada ee geeddi-socodka ayaa laga yaabaa inay ka culus yihiin walaacyada xagga kharashka. Haddii kale, mashaariicda mugga yar kharashka isku-xidhka iyo qalabka ayaa sida caadiga ah geedi socodka ka dhigaya mid aan macquul ahayn haddii gariirad cusub la dhisayo. Qeybta sidoo kale waa in lagu taageeraa si uun inta daaweynta lagu jiro. U dhexeynta xarumaha waa hab caan ah oo loogu talagalay qaybaha noocyada wiishka, laakiin xaalado kale oo badan oo kale waa in laga faa'iideystaa qalabaynta qalabka.
Suurtagalnimada Weyn ee Dilista Marka loo eego inta badan hababka daaweynta kuleylka
Tan waxaa ugu wacan kuleylka degdega ah iyo daminta, sidoo kale u janjeerida abuurista dhibco kulul muuqaalada / geesaha sida: dariiqyada muhiimka ah, jeexmooyinka, godadka iskutallaabta, dunta.
Qallooca leh Induction adkaanshaha
Heerarka jahawareerku waxay u muuqdaan inay ka weynaan doonaan geeddi-socodka sida ion ama gaaska nitriding, sababtoo ah kuleylka / daminta degdegga ah iyo natiijada is-beddelka martensitic. Taas waxaa la yiraahdaa, adkaanshaha indha-indheynta ayaa laga yaabaa inay soo saarto khalkhal ka yar daaweynta kuleylka caadiga ah, gaar ahaan marka kaliya lagu dabaqo aag la xushay.
Xaddidaadaha Maaddada leh Qalitaanka Induction
Tan iyo markii ay geeddi-socodka adkeynta sida caadiga ah kuma lug leh faafitaanka kaarboon ama walxo kale, maaddadu waa inay ku jirtaa kaarboon ku filan oo ay weheliso walxo kale si ay u bixiso adkeysi taageeraya isbeddelka martensitic ee heerka adkaanta la doonayo. Tani caadi ahaan macnaheedu waa kaarboonku wuxuu ku jiraa 0.40% +, oo soo saaraya adkaanta 56 - 65 HRC. Qalabka kaarboonka hoose sida 8620 ayaa loo isticmaali karaa iyada oo ay sabab u tahay hoos u dhigista adkaanta la gaari karo (40-45 HRC kiiskan). Steels sida 1008, 1010, 12L14, 1117 caadi ahaan looma isticmaalo sababo la xiriira kororka adag ee adkaanta la gaari karo.
Faahfaahinta Nidaamka Dusha sare ee Induction Adkeynta
Adkeynta adkaynta waa geedi socod loo adeegsado adkeynta dusha sare ee birta iyo waxyaabaha kale ee isku darsamay. Qaybaha kuleylka la daaweynayo waxaa la geliyaa gudaha gariiradda naxaasta ah ka dibna lagu kululeeyaa heerkulkooda isbeddelka iyadoo la adeegsanayo hawo ku beddelashada gariiradda. Xilliga isdaba-marinta ee wareegga ayaa soo jiidanaysa aag magnetic ah oo ku dhex jira qaybta shaqada taas oo keenta dusha sare ee qaybta inay kuleyliso heerkul ka sarreeya heerka isbeddelka.
Qaybaha waxaa lagu kululeeyaa iyada oo loo marayo aag magnetic ah oo lagu beddelayo heerkul ka mid ah ama ka sarreeya isbeddelka isbeddelka oo ay ku xigto daminta isla markiiba. Waa hab elektromagnetic ah adoo adeegsanaya naxaas induction induction, taas oo lagu quudinayo hadda heer xaddidan iyo heer awood leh.
Categories FAQ, Technologies Tags iibso mishiinka qallajinta indha-indheynta, adkeyn, induction adkaanta, dusha adag, geedi socodka adkaanta, kululaynta kululaynta, Mashiinka adag ee induction, Qiimaha mashiinka adkeeya, Qiimaha adkaanta indha-indheynta, geeddi-socodka adkeynta, Dusha sare ee ku-adkaynta Induction, nidaamka adkaanta adkeynta, waa maxay qallajinta induction Post navigation